Ajụjụ - Aquark Electric Co., Ltd
A Okpomọkụ mgbapụta na-positioned dị ka nso ka ike na-egwu mmiri filtration usoro. Ọ e mere na-eji si ụzọ na-adịghị achọ ka ọ bụla nkpuchi megide ọcha. N'ezie ma ọ bụrụ na a Okpomọkụ mgbapụta kpuchie ini ọrụ ọ ga-eme optimally.
E nweghị uche chọrọ a Okpomọkụ mgbapụta dị ka na ikuku conditioner. Nanị wepụ ihe ọ bụla epupụta, ahịhịa, akwụkwọ, wdg nke mgbe ụfọdụ nakọtara site n'ikuku. The ọdọ mmiri onwu mgbe niile kwesịrị ịnọgide na echiche ziri ezi. The evaporator grills na-ntekwasa iji gbochie corrosion. Otú ọ dị ma ọ bụrụ na ị na-ebi nso a nnu-mmiri na gburugburu ebe obibi nwere ike ị chọrọ sooks ala n'èzí evaporator eriri igwe nyere aka gbochie Mee elu nke nnu na ajari.
Ee. Otú ọ dị ya niile na-adabere na nke nke ọdọ mmiri na oge nke afọ. Okpomọkụ nfuli-mere ịnọgide na-enwe ọdọ mmiri okpomọkụ na a kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na okpomọkụ mgbapụta na-sized ọma na ọdọ mmiri size, ozugbo chọrọ okpomọkụ ruru ya ga-akpaghị aka ịnọgide na-enwe na okpomọkụ niile ọnwa ogologo.
Eletrik na-eresị site na a unit na-akpọ kilowatt-hour. Otu kilowatt-hour bụ hà 3412 BTU. BTU anọchi British Kwes Unit. Ọ bụ a unit nke ụfọdụ na ụfọdụ okpomọkụ mgbapụta emepụta na-eji na ha nkọwa.
Cop anọchi ọnụọgụ nke arụmọrụ ie. The ruru nke ike mmepụta ike ọsọ ọsọ. Nke a bụ dabere na ihere ikuku okpomọkụ na ọnọdụ okpomọkụ nke mmiri nke-egwu mmiri. Ọ na-agwa gị ihe ume arụmọrụ mba nke okpomọkụ mgbapụta.
Dị ka ihe niile na-egwu mmiri kpo oku usoro ị na-gwara iji a ọdọ mmiri cover mgbe egwu mmiri bụ na ojiji. Nke a ga-evaporation (kasị ukwuu okpomọkụ ọnwụ) na a kacha nta na otú belata n'ozuzu ọdọ mmiri kpo oku na-akwụ ụgwọ na-achọghị na obi nkoropụ. A ọdọ mmiri cover nwere ike bee ngụkọta okpomọkụ ọnwụ site 50% 95%.
Aquark okpomọkụ nfuli bụ ịmụta n'elu mma mmiri, ọbụna na-enweghị a ira ihe nke mmezi, a ọdọ mmiri okpomọkụ mgbapụta mfe dịruru 10 ruo afọ 20. Ma, ezi mmezi, anyị ọdọ mmiri okpomọkụ mgbapụta nwere ike n'ụzọ nkịtị-adịru a ndụ.
The Main Ogidi nke ọhụrụ EU F-Gas Iwu na-iji belata umu anwuru na ịkwaga n'ebe ala GWP ngwọta. Nke a na-agụnye a na-adọ ala na oriri nke HFCs na a Mbelata 37% site 2020 na 79% site na 2030. Site 2025 Single Split A / C usoro ihe na-erughị 3kg refrigerant ụgwọ kwesịrị ịnwe a refrigerant na a GWP.
R32 nwere yiri ọrụ nrụgide R410A gburugburu 12-26 Bar (174-377 Psi) Otú ọ dị R32 nwere mma ikike ịgbanwe okpomọkụ-ibu karịa R410A na-anapụta elu ikike karịa R410A eme usoro ihe oru oma.
R32 nwere ala GWP karịa R410 ma na-eji 30% obere refrigerant ụgwọ na-emepụta ihe hà ibu ikike. N'ihi ngụkọta CO2 emission nwere ike belata gburugburu 77%.
N'ozuzu na ala ndị GWP elu larịị nke flammability, R32 ọ dị iche iche. R32, ka e nyere nhazi ọkwa A2L na na nkewa flammable Atiya A2. Nhazi ọkwa na ntụziaka 67/548 / EEC & 1999/45 / EC: F +; R12 Kemgwucha flammable. Ntem naanị nwetara na kụziiri ihe nke ọma mmadụ ga-aka, haruru nrụgide.